Fandalovan’i Belna: potika hatrany amin’ny 90% ny distrikan’i Soalala | NewsMada
Fandalovan’i Belna: potika hatrany amin’ny 90% ny distrikan’i Soalala
Par Taratra sur 11/12/2019
Namela takaitra mavesatra ho an’ny distrikan’i Soalala ny fandalovan’ilay rivodoza Belna tany an-toerana. Potika ny 90%-n’ny tanàna raha ny tomban’ny mponina any an-toerana. Rava hatramin’ny sekoly sy ny hopitaly ka voatery nafindra toerana eny amin’ny Cisco ireo marary.
Lasan’ny rivotra ny ankamaroan’ny tafontranon’ny tokantrano marobe ao Soalala. Rava ny fananana, lasan’ny rano ny biby fiompy sy entana, potika ny fambolena, lasan’ny onjan-dranomasina ny lakana.
Mihatra aman’aina ny fandalovan’ilay rivodoza Belna tao amin’ny distrikan’i Soalala. Maro ireo tsy manan-kialofana, very fananana tao anatin’ny indray mipi-maso. Tsy misy sekoly hianarana… Ao koa ireo fokontany sasany lasa mitoka-monina noho ny fahatapahan’ny lalana ateraky ny ranobe.
Nidina avy hatrany tany an-toerana ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta Ntsay Christian niaraka tamin’ny minisitry ny atitany, omaly maraina. Nanao tombana ny fahavoazana izy tamin’izany hahafahana mitondra vahaolana. Notsidihiny ny Jirama, ny EPP, Ceg, ireo toerana misy ieo traboina…